सौर्य एयरलाइन्सलाई कारबाहीदेखि बैंकहरुको ‘ब्याज युद्ध’ सम्म - Kendrabindu Nepal Online News
सौर्य एयरलाइन्सलाई कारबाहीदेखि बैंकहरुको ‘ब्याज युद्ध’ सम्म
देश विदेशमा आज थुप्रै सकारात्मक तथा नकारात्मक घटना परिघटनाहरु भए । ति घटनाक्रमहरुलाई हामीले केन्द्रबिन्दु डटकम र केन्द्रबिन्दुको युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर पलपलमा अपडेट गर्यौ । यसरी अपडेट भएका अनेकौ समाचारहरु मध्ये प्रमुख समाचारहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। हाइलाइट गरिएको शिर्षकहरुमा क्लिक गरेर बिस्तृत समाचार पढ्न सक्नु हुन्छ ।
बालिका निर्मला पन्तको हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरी अपराधीको नजिक पुगेको बुझिएको छ । सीआईबी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार पक्राउ परेका प्रदीप रावलसंग लिइएको बयानपछि प्रहरी अपराधी नजिक पुगेको हो। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको अनुसन्धानक क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुधबार रावललाई पक्राउ गरेको थियो। रावलसँग गएराति १० बजेदेखि २ बिहान बजेसम्म बयान लिइएको थियो।
सौर्य एयरलाइन्सको सम्पूर्ण उडान आज (बिहीबार)बाट बन्द भएको छ । एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि सबै उडान रद्ध गरेको हो।विमानस्थल कार्यालयले एयरलाइन्सले अहिलेसम्म ३ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । विमानस्थल कार्यालयले बिगत एक बर्षदेखि बक्यौता तिर्न पटक पटक म्याद दिंदै आएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले सौर्य एयरलाइन्सले बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले बाध्य भएर उडान रोकेको जानकारी दिए। उनले बक्यौता नतिरेसम्म उडान खुल्ला नहुने जानकारी दिए। कम्तिमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरे उडान सुचारु गर्न सकिने उनले बताए।
बैंकहरु बीच ‘ब्याज युद्ध’, कुन बैंकको कति ?
वाणिज्य बैंकहरुबीच यतिबेला ‘ब्याज युद्ध’ शुरु भएको छ । बैंकर्स संघले मंगलबार बिहान ब्याजदर बारे नयाँ निर्णय गरेपछि बैंकहरुबीच ‘ब्याज युद्ध’ शुरु भएको हो। आफ्नो बैंकमा भएको रकम अरु बैंकले खोस्ने डरले यतिबेला बैंकहरु चिन्तित छन् । गत मंगलबारदेखि बाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेका हुन्। मंगलबारदेखि शुरु भएको ब्याजदर बढाउने क्रम ३ दिनभित्र ५ वटा बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् ।
जोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ सबैले पाउने !
जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले मंसिर १६ गतेदेखि निष्काशन गरेको साधारण शेयर भर्ने समय सकिएको छ । अन्तिम दिन बुधबारसम्म ८२ हजार ६६५ जनाले ५९ लाख १२ हजार ६५० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ । यो कम्पनीले मागेको भन्दा करिव २.८१ गुणा बढी हो । बिक्रि प्रबन्धक सिद्दार्थ क्यापिटलले तथ्यांक भेरिफाइ भैरहेकाले यसमा केही घटबढ हुन् सक्ने जनाएको छ ।
एसिया प्यासिफिक समिटबारे समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेकपामा विशेष बैठक माग
नेकपा नेताहरुले विशेष बैठकको माग गरेका छन् । विवादास्पद ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संलग्नताले पार्टीकै छवि धमलिएको भन्दै नेकपा नेताहरुले विशेष बैठकको माग गरेका हुन् । यसबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै स्थायी समिति र सचिवालय नेताहरूले बैठकमो माग गरेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षक परीक्षामा असफल भएकाहरुले तत्कालै बिदा नपाउने भएका छन् । अहिले सार्वजनिक भईरहेको अस्थायी शिक्षक परीक्षाको नतिजामा धेरै जसो शिक्षकहरु असफल भईरहेको बेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले असफल भएका शिक्षकहरुलाइृ तत्काल बिदा नगर्ने भएको हो । सुविधा रोजेका तथा परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरु तत्काल बिदा नहुने भएका हुन् । लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि पनि प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवार्ता नहुञ्जेलसम्म अस्थायी शिक्षकहरुलाई सेवाबाट बिदा नगरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
निर्मलाका निम्ति न्याय माग्नेहरु शितल निवासबाट पक्राउ
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि धर्नामा बसेर प्रदर्शन गरेका युवाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डबाट फर्कदै गर्दा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।शितल निवास अगाडिको सडकमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गर्न १५ जनाजति युवा भेला भएका थिए । अधिकांश प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले समातेर लगेको हो । प्रदर्शनकारीहरुले निधारमा ‘म निर्मला’ लेखेका थिए भने प्लेकार्ड पनि बोकेका थिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि एकै प्रकारको पोशाक लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।महानगरको शिक्षा विभागले ‘महानगरीय शिक्षा रुपान्तरण अभियान सुधार सोच’ कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक र संस्थागत विद्यार्थीको पोशाकमा एकरुपता ल्याउनका लागि एकै प्रकारको पोशाक लागू गर्ने तयारी गरेको विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी गराए ।
‘सारेगमप’ को टप ११ बाट बाहिरिइन् मेनुका
ओपोद्वारा नेपालमा पहिलो पटक आर १७ प्रो सार्वजनिक गर्ने तयारी
देउवाको घुर्कीदेखि प्रदिप नेपालको आरोपसम्म
कांग्रेसको ‘गुट राजनीति’देखि वाइडबडी विमान प्रकरणसम्म